Ndị na -emepụta Zirconia Block 3D - Multilayer Zirconia Block Factory & Suppliers
Nnukwu Translucency 57% Tupu ...
Yucera 1200MPa ekwe stre ...
Yucera eze ST zirconia ...
3D Pro Multilayer Zirconia Blocks Cerec 57% Nghọta 1050 Mpa Zirconia CAD CAM Block Disc Maka Dentistry eze.
Anyị nwere ike nye 3D Pro Multilayer Zirconia Blocks Cerec Dị ka n'okpuru:
Aha: 3D Pro Multilayer Zirconia Blocks Cerec
Ịdị umeala n'obi: 43%-57%
Ike ehulata: 1050Mpa-700Mpa
Ọnọdụ okpomọkụ: 1500 C
Njupụta: 6.07 +/- 0.03g/cm
3D Plus/ Pro Ceramic Dental Zirconia Block Self Colored ISO CE Asambodo ejiri na mweghachi Monolithic na glazed.
Okwu mmalite nke YUCERA:
YUCERA Zirconia Block, ihe mgbochi zirconia nwere ọtụtụ ihe, enwere ike iji ya mepụta plọọkụ zirconia contour zirconia zuru oke. Enwere ike iji 3D ngọngọ ngwaahịa ngọngọ zirconia na sistemụ mepere emepe 98 ọ bụla. Mmekọrịta nke teknụzụ ihe kachasị elu nke Kuraray Noritake Dental na akụrụngwa teknụzụ dị elu nke Dentsply Sirona na-eme ugbu a ka o kwe omume chepụta mweghachi zirconia.
Ọnụahịa ụlọ ọrụ CE CE 3D Multilayer Dental Zirconia Block Colored For Milling Machine
YUCREA bụ onye nrụpụta ọkachamara maka CAD/CAM Ceramics Dental Zirconia Block nwere akara dị iche iche dịka: White Zirconia, Zirconia Preshaded na Multilayer Preshaded Zirconia
Nchedo: 3D Multilayer Dental Zirconia Block ike flexural dị elu, nguzogide mgbaji ọkpụkpụ, ịdịte aka pụrụ iche, na ihe igwe nri dị mfe nwere nkenke.
Nkasi obi: 3D Multilayer Dental Zirconia Block nwere conductivity thermal dị ala, mgbanwe na -ekpo ọkụ na oyi anaghị akpali pulp.
3D Multilayer Dental Zirconia Block nke nwere ọkwa atọ nwere agba agba dị mfe Ijikwa: Polish ma ọ bụ Glaze mgbe Sintering dabara maka okpueze contour na àkwà mmiri zuru ezu.
Njirimara anụ ahụ maka 3D Multilayer Dental Zirconia Block
Njupụta ezoro ezo: 6.07 ± 0.03g/m³
Ike ehulata: 1200MPa
Ọnọdụ okpomọkụ na -agbada: na -atụ aro 1530 ℃
Ngosipụta Yucera 3D Multilayer Dental Zirconia Block
Ngosi ịnagide Inlay Onlay Àkwà mmiri Okpueze Bridges 2-5unit Ọdịda Mkpuchi Mgbakwunye
St. * * * * *
NT * * * * *
ST Agba * * * * *
3D-ML gbakwunyere * * * * *
Nzaghachi sitere na ụlọ ọgwụ anyị:
Nkọwa ngwaahịa zuru ezu nke 3D Plus Multilayer Zirconia Block Cerec:
Aha Yucera 3D gbakwunyere ọtụtụ mkpụrụ osisi zirconia
Njupụta siri ike nke 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe mgbochi zirconia 6.07 ± 0.03g/cm3
Siri ike nke 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe mgbochi zirconia 1200HV
Ọnọdụ okpomọkụ nke 3D gbakwunyere cerec block multilayer zirconia Kwadoro 1500 ℃
Ike gbagọrọ agbagọ nke 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe mgbochi zirconia 1050Mpa-700Mpa
Translucency nke 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe mgbochi zirconia 43%-57%
Njirimara ịka nká
Oge Monoclinic <20%
Solubility nke Chemical
Yucera 3D gbakwunyere multilayer zirconia block cerec bụ zirconia klaasị kachasị elu, zirconia nke kacha agbanwe agbanwe, nke na-agbanwe agba (site n'ọchịchịrị ruo ìhè), ike (site na 1050mpa-700mpa), na translucency (43%-57%) ji nwayọọ nwayọọ si na cervical iji kpalie akụkụ n'otu ngọngọ zirconia multilayer.
Nke a multilayer zirconia block cerec nwere ike ime ezé azụ na ezé ihu. Otu zirconia iji kpuchie ihe ngosi niile.
Ụfọdụ nzaghachi ndị ahịa na -amasị anyị na ha na -ahọrọ 3D gbakwunyere multilayer zirconia block cerec karịa Aidite 3D pro na Ivoclar zircad Prime.
Njirimara nke 3D Plus Multilayer Zirconia Block Cerec:
Yucera mepụtara 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe mgbochi zirconia nke nwere contour zirconia. Ihe zirconia contour zuru oke dị nso na ezé eke karịa ihe ndị ọzọ site na nlele anya. Ọzọkwa, abrasion ya na -eme ka ọ bụrụ ihe ezé nwere ihe ndị nwere biomimetic
Ike cervical nke 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe zirconia block cerec ruru 1050MPa, nke bụ nnukwu nkwalite. Àkwà mmiri ndị ogologo ogologo kwụsiri ike, ọ na -emezu ike ike ụlọ nyocha maka ọtụtụ ihe ngosi.
Mgbanwe Eke Na -enweghị Layer
Mgbanwe agba nke 3D gbakwunyere ọtụtụ ihe zirconia block cerec nwere zirconia contour zuru oke yiri ezé sitere na cervical ruo incisal. 3D gbakwunyere multilayer zirconia block cerec nwere gradient dị larịị na -enweghị nzipụta ngwa ngwa
3D gbakwunyere multilayer zirconia block cerec bụ onye ndu dijitalụ n'ọhịa nke ihe Zirconia. A na -ejikọ zirconia contour zuru oke nke nwere njiri mara mma yana 3D gbakwunyere multilayer zirconia block cerec Rapid Aesthetic Solution, nke ga -enyere ụlọ nyocha aka imecha ma nyefee mweghachi zirconia n'ime awa 24.
Onyunyo na nha nke 3D Plus Multilayer Zirconia Block Cerec dị:
Mepee Sistemụ Sistemụ Zironzahn Onyunyo dị
98*10 mm 95*10mm A1-D4, BL1, BL2, BL3
Ogologo: 98*14mm 95*14mm A1-D4, BL1, BL2, BL3
Ogologo: 98*18mm 95*18mm A1-D4, BL1, BL2, BL3
Ihe ngosi akwadoro nke 3D Plus Multilayer Zirconia Blocks Cerec:
Akwa okpueze zuru oke
Ihe ngagharị zuru oke
ejigide àkwà mmiri
Full okpueze nbanye
57% Translucency 3D Plus Multilayer Dental Zirconia Block Disk Dental Zirconia Discs.
Nwe eze 1500 ℃ zirconium blocks na 49 zirconium blocks na ce eze zirconia oghere eji na ụgha zirconia blocks
Okwu mmalite nke YUCERA's 3D Plus Multilayer dental zirconia:
3D gbakwunyere multilayer zirconia blockis a zirconia eze (Y-TZP ZrO2) maka mweghachi dị ukwuu, mweghachi monolithic. 3D gbakwunyere multilayer zirconia block na-enye ya na 700-1050MPa ike flexural dị elu jikọtara ya na oke translucency. The adụ ihe tupu sintering ana achi achi otu mgbalị n'ichepụta usoro. Enwere ike ịme mkpuchi seramiiki na sistemụ seramiki niile (lee uru CET).
Njirimara nke 3D Plus Multilayer eze zirconia/ceramics block/oghere/discs:
1. Njupụta siri ike nke diski zirconia 6.07 ± 0.03g/cm3
2. Ịma mma pụrụ iche - oke translucent na ike dị elu.
3. Translucency nke zirconia diski 57-43%
4. Nhọrọ ụcha sara mbara-agba 19 (Blench, A1-D4).
5. Ike ekwe nke zirconia disc700-1050 MPa
6. Ike nke zirconia diski 1200HV
7. Ngosipụta dị ukwuu-site na mweghachi nke otu nha ruo akwa akwa nwere ọtụtụ ihe.
8. Vita 16 agba nke A1-D4 na Blench OM1/2/3 agba
9. Ihe na-acha odo odo eze zirconia blocks
10. Sistemụ dijitalụ CAD CAM
11. High translucent zirconium oxide maka aesthetics zuru oke
1. Nhazi monolithic ma ọ bụ seramiiki ele mmadụ anya n'ihudị nso
2. Enwere ike ịcha ahịhịa ma ọ bụ mikpu n'ime mmiri
Mweghachi otu ezé (ihu na azụ)
Àkwà mmiri 3-unit (ihu na azụ)
Àkwà mmiri ọtụtụ nwere NexxZr + ọcha (ihu na azụ)
YUCERA usoro niile
.Dị Koodu Ịdị mma Ike ehulata Ekweghị ekwe Agba Nha
Ihe mgbochi ọcha zirconia Ht 40% ≧ 1200Mpa (Av.) 1200HV White (mmiri mmiri na -acha odo odo na ndo vita 16 na 26
onyinyo Sistemụ emepe emepe & sistemụ Zirkon zahn & Sistemụ Amann Girrbach
St. 43% ≧ 1200Mpa (Av.) 1200HV
Ihe mgbochi zirconia nke edochiri anya ST-Agba 43% ≧ 1100Mpa (Av.) 1200HV Vita 16 na BL1, BL2, BL3
Ihe mkpuchi zirconia nke nwere ọtụtụ ihe SHT-ML 46% ≧ 900Mpa (Av.) 1200HV
3D gbakwunyere-ML 43%-57% M 700Mpa (Av.) - 1050Mpa (Av.) 1200HV
Kwesịrị ekwesị maka sistemụ dị n'okpuru
Sistemụ Cadcam mepere emepe Sistemụ Zironzahn Amann Girrbach
Ogo 98x12mm 95x12mm AGX12mm
Ogo nke 98x20 mm Akụkụ nke 95x20 mm AGX20mm
Ogo nke 98x22 mm 95x22mm AGX22mm
Ogo nke 98x25 mm 95x25mm AGX25mm
SHT Multileyer /UT Multilayer /3D Multilayer Sintering Curve
Nzọụkwụ na -agbada Malite Okpomọkụ (℃) Ọgwụgwụ Okpomọkụ (℃) Oge (Nkeji) Ọnụego (℃/Min)
Kwụpụ 1 20 900 90 9.7
Nzọụkwụ 2 900 900 30 0
Kwụpụ 3 900 1500 180 3.3
Nzọụkwụ 4 1500 1500 120 0
Kwụpụ 5 1500 800 60 -11.6
Kwụpụ 6 800 obi jụrụ 20 120 -6.5
Ihe mgbochi 3D Zirconia Block Dental Lab Translucent Blocks
Yucera's 3D gbakwunyere Multilayer zirconia ngọngọ bụ ngọngọ klaasị zirconia kachasị elu, ihe okike zirconia kachasị, nke na-agbanwe agba (site n'ọchịchịrị ruo ìhè), ike (site na 1050mpa-700mpa), na translucency (43%-57%) ji nwayọọ nwayọọ cervical ruo akụkụ akụkụ n'otu diski zirconia.
Ụdị ngọngọ zirconia a na -akpọ multilayer nwere ike ime ezé azụ na ezé ihu. Otu ngọngọ zirconia iji kpuchie ihe ngosi niile. Ụfọdụ nzaghachi ndị ahịa na -amasị anyị na ha họọrọ 3D gbakwunyere multilayer zirconia ngọngọ karịa Aidite 3D pro zirconia block na Ivoclar zircad Prime.
Dental Ceramic 3D Plus Multilayer Dental Zirconia oghere/ihe mgbochi maka igwe CAD CAM
Nchekwa: Enweghị mgbakasị ahụ, enweghị corrosion, ndakọrịta bio dị mma
Mma: Enwere ike mepụtaghachi agba ezé eke
Nkasi obi: conductivity dị ala dị ala, mgbanwe na -ekpo ọkụ na oyi anaghị akpali mkpali ahụ
Ogologo: Karịrị 1100MPa ike mgbagha, na -adigide ma baa uru